Top 10 mobiles ee 2017 | Androidsis
Waxaynu haddaba ku jirnaa Diisambar, xilli ay tahay inaan dib u milicsanno sannaddii aan ku noolayn. Munaasabad inta badan looga bartay samee liisaska ugu fiican sanadka. Tani waa waxa aan sameyneyno maanta, a xulashada 10-ka taleefan ee ugu wanaagsan Android ee soo gaadhay suuqa sannadkan. Intaa waxaa dheer, xulashadani waxay ku siin kartaa xoogaa fikrado ah hadiyadahaaga kirismaska.
Sannadkan 2017 wuxuu ahaa sanad inaga reebay mobilada ugu xiisaha badan suuqa. Sidaa awgeed xulashada 10 taleefan oo keliya ayaa wax yar adag. Laakiin waxaan ku guuleysanay inaan liiska ka dhigno 10 mobiles oo shaki la'aan mudan inay noqdaan halyeeyo. Telefoonadee ayaa liiska sameeyay?
Sababaha ay qalabkani ugu jiraan liiska way badan yihiin. Waxaa jira qaar ka istaagay inta kale. In kasta oo fikraddu aysan ahayn in diiradda la saaro oo keliya dhammaadka-dhamaadka, laakiin ka tag xulasho wanaagsan oo qalab aad u qiimo badan. Waa maxay taleefannada aad u maleynayso inay ku jiri doonaan 10-kan sare? Dhammaanteen waxaan uga tagnay hoosta. In kastoo, ay muhiim tahay in sidaas la dhaho looma diyaarin si gaar ah.
10 Moto Z2 Ciyaaraha
Waxaan ku bilaabaynaa liiska mid ka mid ah calanka calamada Kuuriya. Samsung ayaa soo saartay dhowr qalab sare sanadkan. In kasta oo ay ahayd Galaxy Note 8 in ay suurtogal tahay in ay taagan tahay inta ugu badan. Qalab sababo badan u istaagay. Isaga Naqshadeynta muuqaalka, mid ka mid ah isbeddellada sanadka, ayaa waxtar badan leh. Intaa waxaa sii dheer, waxay noqotay dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda gudaha leeyihiin laba kamarad.
Shaki la'aan, qalab awood badan oo si fiican u shaqeeya iyo inaan annaga awood u leh sawirro tayo sare leh. Qalabka ayaa hadda laga heli karaa a qiimaha 779 yuuro.
Huawei wuxuu mar horeba noqday mid ka mid ah kuwa ugu iibinta badan uguna caansan adduunka. Waxay sidoo kale ka mid yihiin aaladaha ugu badan ee suuqa laga bilaabay. Shaki la'aan mid ka mid ah kuwa ugu fiican waa tan Mate 10 iyo Mate 10 Pro. Huawei Mate 10 wuxuu leeyahay 5,9 inch screen iyo walaalkiis ka weyn oo ka soo jeeda 6 inches. Sida RAM, midka hore wuxuu leeyahay 4 GB kan kalena 6 GB. Labaduba waxay leeyihiin 64GB oo keyd ah iyo a 4.000 mAh baytariga. Laba qalab tayo leh oo si fiican u matalaya kala duwanaanta-dhamaadka sare ee Huawei.
Huawei Mate 10 waxaa laga heli karaa a qiimaha 677 yuuro. Halka Mate 10 Pro loo heli karo 730 euros.
Halkan ka iibso Huawei Mate 10
Halkan ka iibso Huawei Mate 10 Pro
Waa suurtagal inay tahay qaabka liiska ugu yaab badan, laakiin waa in la yiraahdaa Nooca Isbaanishka ah ayaa naga tagaya taleefannada gacanta oo aad u xiiso badan. Tani waa suurtogal kan ugu fiican. Waxay noqotay calankeedii. Waxay leedahay a 5,2 inch screen. Processor ayaa nagu sugaya gudaha Snapdragon 626 iyo Adreno 506 GPU.Waa inaanu iftiiminaa kamaradeeda dambe ee 12 MP, oo ku habboon qaadashada sawirrada habeenkii.
Qalabkani hadda wuu socdaa waxaa lagu heli karaa qiimo dhan 299 euro oo ah Amazon. In kasta oo ay tahay dallacsiin kumeelgaar ah, haddaba haddii aad xiisaynayso tusaalahan, dhaqso.
Nooca Shiinaha waa midka ugu caansan suuqa. Sannadkan waxay nooga tageen qalab fara badan. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa sidan ahaa Xiaomi Mi 6. Wuxuu leeyahay a 5,15 inch screen. Gudaha gudihiisa ayay ku leedahay processor Snapdragon 835 (kii ugu fiicnaa 2017). Marka lagu daro haysashada 6 GB oo RAM ah iyo ilaa 128 GB oo keyd ah. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a 12 + 12 MP kamarad gadaal ah. Telefoon awood leh oo loogu talagalay inuu la tartamo noocyada ugu caansan ee suuqa ka jira.
Qalabka ayaa hadda laga heli karaa a qiimaha 434,39 yuuro.
Caannimada Sony ee suuqa casriga ayaa si weyn hoos ugu dhacday, in kasta oo ay nooga tagayaan taleefannno aad u xiiso badan sida tan Xperia XZ Premium. Qalab leh a 5,5 inch screen. Waan ku sharaday Snapdragon 835 oo ah processor waxayna leedahay 4GB oo RAM ah iyo 64GB oo keyd ah oo gudaha ah. In kasta oo kamaraddeeda ay tahay in la muujiyo, tayadeeda iyo wixii loogu talagalay hawlo dheeri ah sida Motion Eye ama qabasho saadaal ah
Taleefanka ugu wanaagsan ee loogu magac daray Sony ayaa la helay waxaa laga heli karaa 669,31 euro.
Nooc kale oo aan dhaafin waqtigiisa suuqa waa LG, in kasta oo waddamada kaladuwan ee Kuuriya ay naga tagayaan aaladaha ugu xiisaha badan. Waxay bilaabeen laba mobiles heer sare ah sanadkan, the LG G6 iyo LG V30. Labaduba waxay uqalmayaan inay liiska kujiraan, inkasta oo aan soo xulnay tan labaad. Waxay u taagan tahay iyada 6 inch screen. Sharad on processor a Snapdragon 835 gudaha, oo ay weheliyaan 4 GB oo RAM ah iyo 64 ama 128 GB oo keyd ah. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a 13 + 13 MP kamarad gadaal ah.
LG V30 ayaa hadda laga heli karaa a qiimaha 947,92 yuuro.
Qalabkani wuxuu ahaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan sanadka sabab aad u fudud. Isagu ma yahay Telefoonkii ugu horreeyay ee Xiaomi ee sharad ku dhigta Android One (Android daahir ah). Marka waa qalab aad u qaas ah. Waxay leedahay shaashad 5,5-inji ah. Gudaha waxaa ku yaal a Processor Snapdragon 625. Waxa intaa dheer 4 GB oo RAM ah iyo keyd gudaha ah oo 64 GB ah. Waxay kaloo leedahay a 12 + 12 MP laba kamarad xaga dambe.
Qalabka Xiaomi waxaa laga heli karaa a qiimaha 282 yuuro.
Shirkad kale oo soo martay waqtiyo adag sannadkan, in kasta oo ay xaaladdu u muuqato mid soo hagaageysa. Waa qalabkii ugu fiicnaa ee ay sii daayaan shirkadda Taiwanese illaa iyo hadda. Waxay leedahay a 5,5 inch screen gudahana ku leh Snapdragon 835 oo ah processor. Waxay leedahay 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah. In kastoo, waxa run ahaantii taagan ay tahay iyada kamarad, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa. Kaliya kamarad 12 MP ah oo ku taal dhabarka, laakiin taasi waxay ku jirtaa heerka mobilada laba-kamerada ah.
HTC U11 waxaa laga heli karaa a qiimaha 600 yuuro.
Mid ka mid ah telefoonnadii ugu dambeeyay ee suuqa ku dhacay. Waa nooc cusub oo heer sare ah la sii daayay dhowr bilood ka hor. Isbedelka ugu weyn wuxuu ku jiraa naqshadeynta, maadaama ay hadda sharad ku gashay a shaashad aan xad lahayn, taasi waa bilaa xayndaab. Marka lagu daro lahaanshaha saamiga shaashadda xiddiga ee 2017, saamiga 18: 9. Inta kale ee qeexitaannada, kuwaas oo waxaad ka akhrisan kartaa halkanWay adagtahay inay isbadalaan.
Nooca aasaasiga ah ee qalabka (4GB RAM + 64 GB ROM) ayaa hadda laga heli karaa a qiimaha 599 yuuro.
Motorola waa sumad ku guuleysatay inay ku laabato suuqa oo ay hesho booskeeda. Waxay doorteen inay diirada saaraan heerka dhexe, natiijooyin aad u wanaagsan. Mid ka mid ah taleefannadooda ugu fiican ayaa tan ah Moto Z2 Play, oo ka tirsan heerka dhexe. Leh a 5,5 inch screen gudahana waxay leedahay Snapdragon 626 oo ah processor-ka. Waxay leedahay 4GB RAM iyo 64GB oo keyd ah. Intaa waxaa dheer in a 12 MP kamarad gadaal ah. Guud ahaan, qalab aad u dhameystiran oo dammaanad qaadaya hawlgal wanaagsan.
Qalabka ayaa hadda laga heli karaa a qiimaha 343,99 yuuro.
Tani waa Telefoonadeena 10-ka sare ee 2017. Fikraddu waxay ahayd in wax walba laga helo, in kasta oo sidii la filayay, aaladaha badankood yihiin kuwo dhammaadkoodu sarreeyo. Waxaa jira taleefanno kale oo badan oo u qalma in la soo bandhigo, laakiin 10 kaliya ayaa la xushay. Waxaan rajeyneynaa in liiskani adiga xiiso kuu ahaa oo waxay ku siinayaan fikrado markay tahay cusboonaysiinta moobilkaaga. Sideed u aragtaa Taleefoonadan gacanta ee 10-ka sare ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » 10ka Telefoon ee ugu sareeya 2017